Erciyes wuxuu martigaliyay 53 kun oo soo booqdeyaal ah oo ka kala yimid 90 Magaalooyinka usbuuca | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriErciyes wuxuu soo xayeysiiyay 53 kun oo soo booqdeyaal ah oo ka yimid 90 Magaalo
14 / 01 / 2020 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TURKEY, TELPHER
erciyes ayaa martigaliyay kun booqdayaal ah magaalada dhamaadka todobaadkan
dalxiiska Erciyes Winter dalka Turkiga isbuucaan flagship ah 53 kun oo martida ka 90 gobolladiisa agagaarka Turkiga marti qaaday. Tirada ugu badan ee soo booqda Erciyes ee ka yimid bannaanka magaalada waxaa laga xaqiijiyey Istanbul, Ankara, Antalya iyo Adana.
dalcadaha Alpine ee calanka, kaabayaasha xooggan oo superstructure, goobaha farsamo, goobaha ugu dambeeyay ee technology, hoy iyo gaadiidka sii kordhaya sannad walba ula galo xiiso badan oo Turkiga Erciyes waa mid ka mid kuwa ugu horumarsan ee jiga ski keentay Yurub.
Turkey gaar ahaan agagaarka Istanbul, Izmir sida duulimaadka hal saac via hawada; Ankara, Adana, Mersin, Xatay, Mersin, Konya, Nevsehir, Nigde, Sivas, Aksaray, Kirsehir, Gaziantep, gaar ahaan gobolada deriska ah oo gaadiidku gaaban yahay, gaar ahaan magaalooyinkeenna iyo dhammaan waddanka oo dhan doorbida Erciyes.
Erciyes, oo daadadku ay ku daadiyeen dadka maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah usbuuc kasta, ayaa sidoo kale buuxsamay dhammaadka toddobaadkan. Goobaha gawaarida dadweynaha lagu tirinaayo 1500 oo gawaari ah kii ugu horreeyay ee Istanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Hatay, Gazi Antep, Kahraman Maras, oo ay ku jiraan Aydin, Balikesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Canakkale, Corum, Denizli, Edirne, Erzurum, Sakarya, Tekirdag, ilaa imaatinka baabuurta ka socota 53-da gobol ay soo jiidatay dareenka.
In kasta oo boqolkiiba 45 gawaarida buuraha ay ka yimaadeen bartamaha magaalada Kayseri, 55% waxay ka yimaadeen banaanka magaalada. Marka loo eego xogtii la helay markii la tiriyey 1500 oo gaadiid ah oo laga soo qaaday Erciyes, waxaa la go’aamiyay in 250 gaadiid oo ka imanaya bannaanka magaalada ay ka yimaadeen magaalada Istanbul. Ankara waxay ahayd tii labaad iyadoo leh 203 baabuur halka Adana ay ahayd tii saddexaad oo leh 113 baabuur. Antalya 53, Nevsehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevsehir 25, Nigde Erciyes waxaa laga helay 20 gaari. Ku dhawaad ​​Axad walba oo ku taal Ceerigaabo, waxaa ka socda isu socod gaadiid ah oo qiyaastii 10.000 gaaraya oo ka kooban gawaarida, baararka dalxiiska iyo basaska dalxiiska. Kumaan kun oo kuwa fasaxa ka ah Kayseri iyo gobolada kale ayaa ku raaxeysanaya boodboodhyo kaladuwan oo leh hawlo kala duwan oo baraf ah.
Xarunta Erciyes Ski Center, oo noqotay xarun caalami ah oo leh adeegyadii la fidiyey, ayaa dalxiisayaal aad u sareeya ay dalxiisayaasha maxalliga ah iyo sidoo kale dalxiisayaasha shisheeye ee ka kala yimid waddamada kala duwan ee adduunka. Xilliga jiilaalka, duullimaadyada tooska ah ee ka taga Kayseri, Russia, Ukraine, Belarus iyo Poland ilaa Kayseri ayaa la abaabulaa toddobaad kasta. Ka sokow duullimaadyada tooska ah ee loo tago Erciyes, duullimaadyada loo qorsheeyay ee ka imanaya dalal kala duwan oo adduunka ah, tirada dalxiisayaasha ajnabiga ah ee ka boodaya Erciyes waxay sii kordhayaan sannad kasta qoysaskooda, saaxiibadood iyo kooxaha ka socda Jarmalka, Talyaaniga, America, England, Korea, Malaysia iyo France.
Ereyga loo yaqaan Ergey